Ndi Nzukọ Gị Dị Njikere Iji Jiri Nnukwu data? | Martech Zone
Big Data bu ochicho karia eziokwu maka otutu ndi otu ahia. Nkwenye zuru oke banyere uru nke Big Data na-enye ọtụtụ iriba-na-bolts teknụzụ dị mkpa iji dozie usoro okike data ma weta nghọta siri ike nke data na ndụ na nkwukọrịta ahaziri iche.
Nwere ike nyochaa ịdị njikere nke otu nzukọ iji leverage Big Data site na nyochaa ikike otu nzukọ gafere mpaghara asaa dị mkpa:
Ọhụụ Strategic bu nnabata nke Big Data dika onye onyinye di egwu n’iru nzuko ebumnuche ahia. Ghọta ntinye aka C-Suite na ịzụta bụ ihe mbụ, yana oke nke oge, elekwasị anya, mkpa, akụrụngwa na ume. Ọ dị mfe ikwu okwu. Chọọ maka njikọ ugboro ugboro n'etiti ndị isi ụlọ ọrụ na-eme nhọrọ dị iche iche na ndị ọkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ, ndị nyocha data na ndị na-ere data na-arụ ọrụ ahụ n'ezie. Ọtụtụ mgbe a na-eme mkpebi na-enweghị ntinye ọrụ zuru oke. Ọtụtụ mgbe, echiche sitere n'elu na echiche sitere n'etiti dị iche.
Usoro data nwere ike ịbụ ihe ịsụ ngọngọ ma ọ bụ ihe nkwado. Ọtụtụ ụlọ ọrụ tọrọ atọ site na usoro ihe nketa na itinye ego itinye ego. Ọ bụghị ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ọhụụ ọhụụ doro anya maka eserese mmiri dị ugbu a. Ugboro oge esemokwu dị n'etiti ndị na-elekọta teknụzụ nke mpaghara IT na ndị ọrụ azụmaahịa na-abawanye njide ego ha. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọhụụ na-aga n'ihu bụ nchịkọta nke ọrụ na-arụ ọrụ. Na-agbakwunye na ọgba aghara ahụ bụ ụlọ ọrụ 3500 + na-enye ụdị ọ bụla nke teknụzụ ọgbara ọhụrụ na-eme azịza yiri ya, na-eji asụsụ yiri ya na ịnye ụdị azụmahịa ahụ.
Ọchịchị data na-ezo aka n'ịghọta isi mmalite data, ịnwe atụmatụ maka ingestion, normalization, nchekwa na nhazi ụzọ. Nke a chọrọ nchikota usoro nchekwa agile, usoro inye ikikere akọwapụtara n'ụzọ doro anya na ụzọ maka ịnweta na njikwa. Iwu gọọmentị na-edozi nzuzo na nnabata na ojiji na-agbanwe agbanwe na ojiji nke data. Ọtụtụ mgbe, ọ na-abụkarị ndị okwu dị iche iche na-agwakọta ma ọ bụ na-agagharị n'okwu ndị a kama ịtụgharị uche na atumatu na usoro iwu emebere nke ọma.
Nyocha Nkọwa bụ ihe na-egosi otú nzukọ si arụ ọrụ nke ọma nchịkọta ihe onwunwe ma nwee ike iweta ọgụgụ isi na igwe na-amụ iji mụta. Ajụjụ ndị dị oke mkpa bụ: otu nzukọ ezuola nchịkọta akụrụngwa yana kedu ka esi etinye ha? Ndi nchịkọta agbakwunyere n'ahịa na usoro nhazi nke usoro, ma ọ bụ na-adabere na ntọala hoc? Ndi nchịkọta na-akwọ mkpebi azụmahịa dị mkpa ma na-arụ ọrụ nke ọma na nnweta, njigide, mbelata ego na iguzosi ike n'ihe?
Akụrụngwa Teknụzụ na-enyocha sọftụwia na usoro data ejiri, ịhazi, sachaa, chebe ma melite iyi nke data na-abanye n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ndị na-egosi ihe bụ ọkwa nke akpaaka na ikike iji dozie usoro data, dozie njirimara mmadụ, mepụta ngalaba dị mkpa ma na-abanye ma tinye data oge ọhụrụ. Ihe ngosi ndị ọzọ dị mma bụ njikọta na ESPs, akpaaka azụmaahịa, na ndị na-eweta ọrụ igwe ojii.
Jiri Mmepe nke Ikpe jikọọ ikike nke ụlọ ọrụ iji data ha na-anakọta ma hazie. Hà nwere ike ịchọpụta ndị ahịa "kachasị mma"; buru amụma banyere onyinye ndị ọzọ kachasị mma ma ọ bụ zụlite ndị na-eguzosi ike n'ihe? Ha nwere usoro imepụta ihe iji mepụta ozi ahaziri iche, ịmalite nkebi nke obere, zaghachi omume na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ na-elekọta mmadụ ma ọ bụ mepụta ọtụtụ mkpọsa ọdịnaya nyefere na ọtụtụ ọwa?
Inabata Nwoke Math bụ ihe na-egosi ọdịbendị ụlọ ọrụ; otu ezigbo agụụ otu nzukọ inyocha, iweta ma nweta ụzọ ọhụụ na teknụzụ ọhụụ. Onye ọ bụla na-ekwu okwu dị iche iche nke mgbanwe dijitalụ na mgbanwe data. Ma ọtụtụ na-atụ egwu WMDs (ngwá agha nke ọgba aghara mgbakọ na mwepụ). Companieslọ ọrụ pere mpe na-etinye oge, akụrụngwa na ego iji mee ka data data bụrụ akụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ. Inessbanye na Nnukwu data ዝግጁ nwere ike ịdị ogologo, ọnụ ma na-akụda mmụọ. Ọ na-achọ mgbanwe dị oke mkpa na omume, arụmọrụ, na teknụzụ mgbe niile. Ngosipụta a na-eme ka otu nzukọ kwenye n'eziokwu maka ebumnuche iji data eme ihe n'ọdịnihu.
Alizingghọta uru nke Big Data bụ ihe omumu na njikwa mgbanwe. Criteriakpụrụ asaa ndị a na-enyere anyị aka ile anya nke ọma ebe mgbanwe mgbanwe otu nzukọ nyere. Ghọta ebe ị nọ na ebe ị chọrọ ịnọ nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ị na-emega ahụ.
Tags: etinyere nchịkọtannukwu datannukwu akụrụngwa datannukwu data eji ikpenjikwa mgbanwena-agba egwu site na mgbanwe dijitalụusoro datanchịkwa dataná mgbakọ na mwepụmgbakọ na mwepụọhụụ ọhụụakụrụngwa teknụzụjiri ikpe
Danny Flamberg bụ onye isi na Opera Solutions na-eduga ndị otu ahịa ahịa Omnichannel. Danny Flamberg na-ewu ụlọ na ụlọ ọrụ maka ihe karịrị afọ 25. Na US, Europe, na South America, o nyeere ndị mbido aka ịbụ ndị egwuregwu dị mkpa n'ahịa ha ma nyere aka na-eduga ụdị ụwa niile ịgbatị iru ha, òkè ahịa, na mmekọrịta ha na ndị ahịa. Nweta akwụkwọ ọhụụ ya akpọrọ Gba egwu site na Digital Revolution
Kedu ka Nnukwu data nchịkọta siworo bụrụ ihe dị mkpa maka DSP